Baarlamaanka Somaliland oo taageero u dalbaday ciidamada, si loo gaaro Xaduudaha ay maamulkaas ay sheegtaan. – Puntlandtimes
Baarlamaanka Somaliland oo taageero u dalbaday ciidamada, si loo gaaro Xaduudaha ay maamulkaas ay sheegtaan.
HARGEYSA(P-TIMES)- War ka soo baxay baarlamaanka maamulka Somaliland loogana hadlayay arrimaha kala dhaxeeya dawladda Faderaalka ee Soomaaliya ayaa aad looga hadlay arrimaha Heshiiska Berbera iyo xaduudaha ay ku doodan maamulka Somaliland.
Qaraarkan waxaa ka dhex-muuqda qodob xasaasiyad weyn abuuraya waqtigan, gaar ahaana midka la xariira arrimaha Xaduudaha iyo sidii ciidamada maamulkaas loogu taageeri lahaa in ay gaaraan, taas oo ka dhigan xiisad cusub.
Golaha ayaa ugu baaqay Shacabka Soomaaliland in ay si buuxda u taageeraan Madaxdooda & Ciidamada si ay u gutaan waajibaadka ka saaran sugida Amniga xaduudaha, taas oo loola jeeday u diyaar garowga dagaal ciidan oo hadda saan-saantiisu ka muuqata gobalka Sool.
Gudoomiyaha golahaaas Baashe Max’ed Faarax oo ka hadlayay madasha baarlamaanka ayaa sheegay in xaaladdaha hadda ka jira xaduudaha maamulkaas la wadaago gobalada kale ee Soomaaliya, ayuu sheegay in ay muujinayaan faragalin toos ah.
Kuma dhufan afkiisa deegaanka uu ka soo jeeda ee gobalka Sool, waa meesha kaliya oo ay maanta isku horfadhiyaan ciidamada Somaliland & Puntland, isla markaasna xili kasta laga filan karro dagaalo culus oo dhexmara Puntland & Somaliland.
Go’aanada & hadalada saxaafadda ay isku marinayaan Somaliland iyo dawladda Faderaalka, ayaa cabsi laga qabaa in ay dab ku shido xiisadda Tukaraq oo ilaa hadda aan waxba daawo ah loo helinin mudo ka badan 2 biloodna ay shacabkeedii banaanka uga maqan yihiin, cabsi ay ka qabaan dagaal dhaca awgiis.
WAXA USABAB AHAA GUDOOMIYAHA BAARLAMAANKA PUNTLAND EE MUQDISHO KA HADLAYAY.MARKA JAWAAB AAN KAFTAN AHAYN IYO HADAL TOONA AYAY SOMALILAND KA BIXINAYSAA MACNEHEEDUNA YAHAY IN CIIDANKA QARANKU KU RUQAANSADO XUDUUDKA SOMALILAND EE YOOCADDE LANASOO XIDHAA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMAXAA KU WATAY INUU DHEX GALO XIISADDA SOMALILAND IYO SOMALIA.
MARAAKIIB HUB AHNA WAXAY NOOGASOO DEGAYAA BERBERA NOOGANA IMANAYA UAE MAKAASAANU BUUFINAYNAA CADOWGA KKKKK HADDA HADALKAYGU KAFTAN MAAH EE WAA XAQIIQ.Somalia markay nafta u yaabeen ayay wafti turkey ah noosoo direen si ay noo maslaxaan waxayna ballan qaadeen inay Somaliland toos ula macaamilayaan iyagoo Somaliland toos usiinaya deeqaha ay ugu talo galeen.